4P - Vokatra, vidiny, toerana, fampiroboroboana: ny maodelin'ny marketing 4P dia mandrakotra ny vokatra na serivisy amidinao, ohatrinona ny vola ampanaovinao sy ny sandany, ny toerana ilainao hampiroboroboana azy, ary ny fampiroboroboanao azy.
AWS - Amazon Web Services: Ny serivisy web an'ny Amazon dia manana serivisy mihoatra ny 175 ho an'ny teknolojia, indostria ary tranga maro samihafa izay manolotra fomba fandoavam-bola amin'ny vidiny.
B2B2C - Orinasa amin'ny orinasa ho an'ny mpanjifa: maodely e-varotra izay manambatra ny B2B sy B2C ho an'ny fifanakalozana vokatra na serivisy feno. Mampivelatra vokatra, vahaolana na serivisy ny orinasa iray ary omena izany ho an'ireo mpampiasa azy farany.
CPM - Vidiny isan'arivony: Ny CPM dia fomba iray hafa ampiasain'ny mpitory hitaky vola amin'ny dokam-barotra. Ity fomba ity dia miakatra isaky ny 1000 ny fiatraikany (ny M dia isa Romana ho an'ny 1000). Ampangaina ny mpanao dokam-barotra isaky ny mahita ny dokam-barotra fa tsy impiry na impiry na kitihina.
CTR - Kitiho ny tahan'ny: CTR dia KPI mifandraika amin'ny CTA… ahoana izany ho an'ny lasopy abidia kely! Ny pejy web na ny tahan'ny tsindry Click-through mailaka dia refesina ny isan-jaton'ny mpamaky izay mandray ny hetsika manaraka. Ohatra, raha misy pejy fandraisana, ny CTR dia ny isan'ny olona mitsidika ny pejy mizara ny isa izay mandray andraikitra ary miroso amin'ny dingana manaraka.
DXP - Sehatra fanandramana nomerika: lozisialy orinasa ho an'ny fanovana nomerika mifantoka amin'ny fanatsarana ny zavatra niainan'ny mpanjifa. Ireo sehatra ireo dia mety ho vokatra tokana nefa matetika dia karazana vokatra manambatra ny asa aman-draharaha nomerika sy ny traikefan'ny mpanjifa mifandray. Miaraka amin'ny fampifangaroana azy ireo dia manome analytics sy fahitana mifantoka amin'ny zavatra niainan'ny mpanjifa ihany koa izy ireo.
ELP - Sehatra fihainoana orinasa: Sehatra iray izay manara-maso ireo nomerika momba ny indostria, marika, mpifaninana na teny lakile anao ary manampy anao handrefy, hamakafaka ary hamaly izay voalaza.
FAB - Endri-javatra, tombontsoa tombony: Iray amin'ireo fanafohezan-teny momba ny varotra hetaheta, ity dia mampatsiahy ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpivarotra hifantoka amin'ny tombony azon'ny mpanjifa amin'ny vokatra na serivisy, fa tsy ny zavatra amidiny.
MAIDs - ID momba ny dokambarotra finday or Ireo doka finday: mpamaritra voafaritra manokana, azo averina, tsy fantatra anarana mifandraika amin'ny fitaovan'ny mpampiasa finday ary tohanan'ny rafi-piasan'ny findainy. Ny MAID dia manampy ny mpamorona sy ny mpivarotra hamantatra hoe iza no mampiasa ny fampiharana azy ireo.
NLP- NFanodinana ny fiteny atural: ny fandalinana ny tenin'olombelona voajanahary ao anatin'ny fianarana milina, mamorona rafitra mahatakatra tsara izany fiteny izany.
RMN - Tambajotra fampahalalam-baovao: sehatra dokambarotra izay tafiditra ao anaty tranokala, fampiharana, na sehatra nomerika hafa, ahafahan'ny marika manao dokam-barotra amin'ireo mpitsidika ny mpivarotra.
SAL - Varotra ekena ekena: Ity dia MQL izay nampitaina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny varotra. Nodinihina ho an'ny kalitao ary mendrika hotadiavina. Ny famaritana ny mason-tsivana hahafantarana ny mahafeno fepetra sy ny MQL ho tonga SAL dia afaka manampy ny mpiasan'ny varotra hanapa-kevitra raha tokony hampiasa fotoana sy ezaka amin'ny fanarahan-dia izy ireo.
SME - Foto-kevitra Expert: fahefana iray amin'ny faritra na lohahevitra manokana izay loharanom-pahalalana hanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifanao. Ho an'ny mpivarotra, ny mpanjifa mety, ny mpanjifa fototra, ny solontenan'ny varotra ary ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia matetika ny SME izay manome fidirana mitsikera.
SMS - Serivisy hafatra fohy: Iray amin'ireo fenitra tranainy indrindra ny fandefasana hafatra miorina amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny fitaovana finday.
SPIN - Toe-javatra, olana, fiantraikany, filana: Teknika fivarotana izay fomba "maratra sy famonjena". Hitanao ny teboka manaintaina ny prospect ary "handratra" azy ireo amin'ny fanitarana ny vokany mety. Avy eo tonga amin'ny "famonjena" miaraka amin'ny vokatrao na serivisinao ianao
TLD - Top-Level Domain: ny sehatra amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny rafitra anaran'ny Domain hierarchical Domain of the Internet aorian'ny domain root. Ohatra: www.google.com:
URL - Locator loharano fanamiana: Fantatra amin'ny anarana hoe adiresy tranonkala ihany koa, ilay loharano an-tranonkala izay mamaritra ny toerana misy azy amin'ny tambajotran'ny solosaina sy ny mekanisma hakana azy.
USP - Fampisehoana mivantana: Fantatra amin'ny anarana hoe a teboka fivarotana tsy manam-paharoa, ny paikady marketing amin'ny fanaovana tolo-kevitra tokana ho an'ny mpanjifa izay naharesy lahatra azy ireo hisafidy ny marika na hivadika amin'ny marikao.
VOD - Video On Demand: dia rafitra fizarana haino aman-jery mamela ny mpampiasa hiditra amin'ny fialamboly horonantsary tsy misy fitaovana fialamboly horonantsary nentim-paharazana ary tsy misy fetran'ny fandaharam-potoana fampielezam-peo tsy miovaova.